Laamaha Amniga Kenya oo Amarro Dul-Dhigtay xoogsatada Waqooyi Bari – Radio Daljir
Diseembar 1, 2015 10:51 g 0
Somalia, December 02, 2015-(Daljir)_ Dowladda Kenya ayaa amar ku bixisay in la wada xiro Kaawooyinka Dhagaxa ee Mandera sababo dhinaca Ammaanka.
Taliyaha Boliska Mandera, Job Boronjo ayaa ka codsaday Xoogsatadda Kaawooyinka inay joojiyaan shaqada ilaa bilowga sannadka soo socda, wuxuuna xusay inay u baahan yihiin Waqti ay ku maamulaan Ciiddanka Ammaanka iyo in ay Kooxda Ammaanka ugu suurto-gasho inay soo booqdaan Qoysaskooda, waa sida uu hadalka u yiri.
Taliyaha waxa uu tilmaamay inay Xoogsatada Kaawooyinka u nugul yihiin inay la kulmaan Weeraradda Alshabaab ee xilli kasta la filan karo.
In ka badan 500 Xoogsato ayaa ka shaqeysta Kaawooyinka Dhagaxa ee Koromeey ee duleedka Mandera ee W/bari Kenya.
Bishii December 2-dii ee Sannadkii hore, weerar ay Alshabaab ku qaadeen Deegaankaasi waxaa lagu dilay 36 Shaqaale Kenyan aan Muslim ahayn.
Sidee loo Hogaamiyaa Dal Afrikaan ah ?